चितवनमा स्क्रब टाइफसबाट एक पुरुषको मृत्यु – उजेली न्यूज
२०७९ जेठ ०८, आइतबार
चितवनमा स्क्रब टाइफसबाट एक पुरुषको मृत्यु
प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०७७, मंगलवार १५:०७
चितवन । भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत स्क्रब टाइफसका एक बिरामीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका–१ ठिमुराका ३२ वर्षीय पुरुष रहेका छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी लिलाधर पौडेलका अनुसार गत असार २९ गते उनी उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका थिए । ज्वरोसँगै श्वासप्रश्वास, मुटु र कलेजोमा समस्या देखिएका उनको मंगलबार बिहान मृत्यु भएको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए । जिल्लाको एक मेडिकल कलेजमा उपचार गरिरहेका ती बिरामीको खर्चको अभाव भएपछि भरतपुर अस्पताल ल्याइएको बताइएको छ ।
उनका अनुसार मृत्युको कारणमा स्क्रब टाइफसलगायत अन्य समस्या उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीले गत आवमा डेङ्गुबाट मृत्यु भएका तीन जनामध्ये एक जनामा स्क्रब टाइफस पनि देखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मुसाको जुम्राले टोकेर स्क्रब टाइफस रोग लाग्छ ।
मुसाको जुम्रा झारमा झर्ने र त्यसबाट मानिसमा टाँसिएर यसले टोक्छ । चिकित्सकका अनुसार स्क्रब टाइफस रोग लागेमा १०४ डिग्री ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, विभिन्न ठाउँमा रातो डाबर आउने, शरीरका विभिन्न अंग दुख्ने लक्षण देखिन्छ । मुख्य गरी मुसाको नियन्त्रण गर्ने तथा झारका काम गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
Posted in मुख्य समाचार, स्वास्थ्य
Previous: रुकुम पश्चिममा ३८ औँ बीपी स्मृति दिवस
Next: साउन ८ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात चलाउन व्यवसायी सहमत
मतदातालाई धन्यवाद दिन मुसिकोटका नगर प्रमुख गाउँमा
माओवादी विरासत–रोल्पामा जोगियो! रुकुममा भत्कियो!
मुसिकोटको मेयरमा कांग्रेसका केसी र उपमेयरमा नेकपा एसका पुन विजयी
बाँफिकोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिए सपथ
नगर सभापति ओलीद्वारा नैतिकताको आधारमा राजिनामा